Caqabadaha ay la kulmaan dadka araga la' ee Soomaaliya - BBC News Somali
Caqabadaha ay la kulmaan dadka araga la' ee Soomaaliya
26 Maajo 2017
Dunida horumartay, way fududahay in qofka uu nolol maalmeedkiisa wato isaga oo aan arag lahayn, waayo waxaa jira qalab iyo tasiilaad loogu tala galay oo nolosha u fududeyna.
Si taa ka gedisan, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dadka arag la' ay kala kulmaan caqabado aad u tira badan sida in tasiilaadkii wax lagu baran lahaa ama lagu shaqeyn lahaa oo aanan jirin.
Hay'adda Qaramada Midoobay ee Caafimaadka ee WHO ayaa ku qiyaasayso in 100-kii qof oo Soomaaliya ku nool mid ka mid ah uu indhaha la' yahay.
Sidoo kale, weli la ma hayo maclumaad ku saabsan tirada dadka araga la' ee wax bartay.
Magaalada Muqdisho waxaa ku yaalla laba dugsi keliya oo loogu tala galay in ay wax ku bartaan dadka araga la'. BBC-da ayaa booqatay mid ka mid ah dugsiyadaasi oo ay maalgeliso shirkad si gaar ah loo leeyahay.
Dugsigaasi oo la yiraahdo Al-Nuur waxaa dhigta arday gaaraysa 75 oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo ay da'doodu u dhaxeyso 10 ilaa iyo 25 sano.
Inkastoo waxbarsahada ay bilaash tahay haddana baahida ay qabaan ma aha mid si kaamil loo daboolay.
Caqabadaha ugu waawayn ee ay wajahaan ardeyda waxaa ka mid ah xaaladda ammaanka ee magaalada muqdisho, taasi oo saamayn weyn ku yeelatay.
Cabdiraxmaan Cali waa arday 20 sano jir ah oo ku dhashay arag la'aan. Wuxuu dhigtaa dugsiga Al-Nuur, wuxuuna ka mid yahay ardeyda dhigata fasalka sideedaad. Wuxuu rajeynayaa in uu noqdo macalin 'si uu bulshada wax u baro' mustaqbalka.
``Ardeyda waxa la baraa farsadamada gacanta, waxayna si gaar ah wax ugu bartaan qalabka Braille-ka ee loogu tala galay dadka indhaha la'', ayuu yiri Cabdiraxmaan.
Waxa intaasi u dheer, in ay isticmalaan teknoloojiyada casriga ah sida Koombuuyuutarada, kuwaasi oo lagu rakibay cod baahiye u sahlaya in ardeyda dhagaystaan xarfaha ay garaacayaan marka ay isticmaalayaan Koombuyuutarka.
Image caption Iskuulka AL Nuur waxaa wax ka barato ilaa iyo 75 arday oo araga la'
Hasayeeshe, caqabadda kale ee ay wajahayaan waxa ka mid ah in aanay helin fursado shaqo marka ay dhamaystaan waxbarashada.
Xaaladda dadka raga la' ee Somaaliya
Maxamed Axmed, waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga Dugsiga Al-Nuur. Waxa uu dhamaystay waxbarashadiisa ilaa heerka shahaadada labaad ee Mastar-ka. Balse waxa uu sheegayaa in ay ku qaadatay dhowr sano ka hor inta aanu shaqo helin.
'' Ma lahan halkan qalab gacan nasiiya oo aan isticmaali karno, haddii ay jiraane ma badna. Sidoo kale dowladda fursad shaqo ma siinayso dadka lixaadkoodu aan idlayn, gaar ahaan dadka araga la'''
Maxamed Axmed, oo wax ka dhiga jaamacado si gaar ah loo leeyahay, ayaa waxa uu intaasi ku daray, ''arrintan waxay niyad jab ku tahay dadka araga la' oo u ku dadaalay waxbarashada, balse haddana aan helin fursooyin. Waa in la aaminaa oo nala siiyaa waxa aan xaqqa u leenahay'' ayuu yiri.
Haddaba iyadoo ay jiraan caqabadahan, ayar ardeyda dhigata Al-Nur, waxay ku sii dadaalayaan waxbarashadooda, waxayna rajeynayaan in maalin un xaaladda isbeli doonto.
'Mustaqbalka waxaan doonayaa in aan macalin noqdo, si aan dhinaca horumarka uga caawiyo bulshada. Caqabadda ugu weyn ee aan wajahayo waa tan amni-darada. Xaaladda ammaanka ee magaalada Muqdisho waa mid aad u xun, inkastoo ay ka soo reynaysay wakhtiyadii dambe. Waxaa dhacda in mararka qaar la xiro waddooyinka, taasina ay sababto in aanan aadi wayno iskuulka``, ayuu yiri Cabdirxmaan oo aan kula kulanay iskuulkiisa.